निर्वाचन देशद्रोही तत्वलाई ठेगान लगाउने अवसर होः प्रधानमन्त्री « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ माघ आईतवार १४:५९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै विरोध गर्नेहरु लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले संसद पाँच वर्षसम्म जागिर खाने स्थायी जागिर नभएको भन्दै जनताका पक्षमा काम नगर्नेहरुको मूल्यांकनका लागि निर्वाचनमात्र विकल्प भएको बताए ।
उनले भने, ‘ देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने, देशलाई बहुमतको सरकार तोडेर जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताको नाटक गर्ने अनि संसदमा पाँचवर्षसम्म जागिर खान पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यो स्थायी जागिर हो ? देशको सेवा नगरेर अर्काको निर्देशनका काम गरेपछि जनताको ताजा जनादेशका लागि जानु विकल्प छैन ।’
उनले जनताको पक्षमा काम नगर्ने सांसदहरुलाई निर्वाचनमा दण्ड र का गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले आफू तानाशाह नभएको बताए । उनले भने, राम्रो काम गरे नगरेको मूल्यांकन गरी पुरस्कृत गर्ने कि दण्ड दिने तपाइँहरु फैसला गर्नस् भन्दा म कसरी तनाशाह भए ? मैले त लिएको छैन मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन । अलमलमा नपर्नु देश अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन देशको अहितमा काम गर्ने देशद्रोही तत्वलाई ठेगान लगाउने अवसर भएको समेत बताए ।